China Kitapo anaty boaty ho an'ny atody ranoka (sarimihetsika mazava 1-20Liter) Mpanamboatra sy mpamatsy |Nanhua
Overview ny orinasa
Kitapo aseptika (sakanana manara-penitra)
Kitapo aseptika (sakanana avo)
Kitapo anaty boaty
Kitapo anaty boaty ho an'ny divay
Kitapo anaty boaty ho an'ny menaka fihinana
Kitapo anaty boaty ho an'ny simika
Kitapo anaty boaty ho an'ny atody misy rano
Kitapo ao anaty boaty ho an'ny ranom-boankazo
Kitapo anaty boaty ho an'ny simika (sarimihetsika mazava 1-20Liter)
Kitapo anaty boaty ho an'ny ranom-boankazo (kitapo aseptika 1-10 litatra)
Kitapo anaty boaty ho an'ny atody misy rano (sarimihetsika mazava 1-20Litra)
Kitapo anaty boaty ho an'ny menaka azo hanina (sarimihetsika mazava 20/22Liter)
Kitapo anaty boaty ho an'ny divay (sarimihetsika metaly 2-5L)
Film Mazava: PA / PE + PE
Sakana avo: Evoh(COEX)+pe
Haben'ny kitapo 1-25 litatra(namboarina)
Fampiasana indostrialy Sakafo:Vinaingitra, zava-manitra, saosy, menaka fihinana, atody ranoka, jam
Beuerage:Kafe sy dite, ronono sy ronono, ranom-boankazo, mamy, fanahy, rano, divay, zava-pisotro malefaka.
Tsy sakafo: Ny akora simika amin'ny fambolena,Fanadinana fiara,Beautye&Fikarakarana manokana,Cleanip,Simika.
antoka kalitao 24 volana
hafanana -20 ° C ~ +95 ° C
endri-javatra 1. Fampisehoana sakana tsara ho an'ny sakafo misy rano
2.Environmentally ambany karbaona mahomby, mifanaraka tanteraka amin'ny vaovao
fitsipika momba ny tontolo iainana
3. Vahaolana mahomby raha oharina amin'ny fonosana nentim-paharazana toy ny can,
4. Mifanaraka amin'ny fitsipika momba ny famonosana sakafo
5. Re-closable amin'ny cap
6. Ahena ny vidin'ny fonosana sy ny fitaterana, fitahirizana mora
7. Strong famehezana hery, tsy tapaka, tsy leakage
8.Eco-namana & hamandoana porofo, miaro amin'ny hazavana, entona sakana
Santionany fotoana fitarihana 1-5 andro
Fotoana famokarana 15 andro
Fepetra ara-pahasalamana BPA maimaim-poana
Tombontsoa lehibe 1. Ny kitapo sy ny paompy dia miara-miasa mba hanalava ny androm-piainan'ny talantalana mialoha sy aorian'ny fanokafana ny fonosana.
2. Ny fonosana Bag-in-Box dia omena fisaka mba hampitomboana ny toerana fitehirizana sy hampihenana ny saran'ny fitaterana.
3. Ny kitapo tsirairay dia namboarina manokana mba hitehirizana ny ranon-javatra marina ao anatiny, hiantohana fa tsy voaloton'ny rivotra any ivelany ny ao anatiny.
4.Sariaka ny tontolo iainana - ambany kokoa ny dian-tongotra karbaona noho ny plastika na fitaratra
1. Ny atody misy rano dia tsy azo avela ela amin'ny mari-pana na rehefa mafana ny andro.Satria manan-karena amin'ny proteinina sy ny otrikaina hafa ny atody misy rano, dia mora miteraka bakteria ny otrikaina.Apetraka ao anaty fitoeran-javatra mandritra ny fotoana maharitra, bakteria maro no hitombo ao, ary ny ranon-javatra mahavelona dia mora very.
2. Ny kitapo-in-boaty dia sterilized amin'ny alalan'ny taratra, ary ny ao anatiny ny kitapo dia sterile tanteraka.Ny atody ranoka dia sterilized mandritra ny fanodinana, ary avy eo dia azo fenoina ao anaty kitapo miaraka amin'ny milina famenoana ny atody ranoka.Ny kitapo dia afaka manakana tsara ny rivotra sy ny atody ranoka Mahazoa fitehirizana maharitra.
3. Ny fitaovana amin'ny kitapo-in-boaty dia mety ho tena mety amin'ny atody ranoka.Ny sarimihetsika polyethylene dia tena malefaka ary mahatanty ny hafanana ambany amin'ny hafanana mangatsiaka amin'ny atody ranoka, ary azo atao anaty baoritra.
teo aloha: Kitapo anaty boaty ho an'ny menaka azo hanina (sarimihetsika mazava 20/22Liter)
Manaraka: Kitapo anaty boaty ho an'ny ranom-boankazo (kitapo aseptika 1-10 litatra)
Adiresy: No.20 Yunlongshan Road, Fushan District, Yantai city, Shandong province.
WhatsApp & Wechat: +18660537400
Ny fonosana Bag-in-Box dia vahaolana famonosana ranom-boankazo vaovao.
Fiarovana ny tontolo iainana sy karbônina ambany - fonosana BIB
Fonosana malefaka 220LT kitapo aseptika